Generaal Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe) oo maanta Warbaahinta u sheegay inuu bilaaban doono dhawaan dagaal Al-Shabaab ka dhan ah
Taliyaha ciidamada Milateriga Dowladda Federaalka Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe) oo maanta Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu bilaaban doono dhawaan dagaalada Dowladda ay kala soo horjeedo Ururka Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay Taliyaha in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaaladaasi ay u bilaaban doonaan, isaga oo intaasi ku daray hadalkiisa in muddo dhaw oo 2-bil gudahooda ah Shabaab dalka looga saarayo.
Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in la saxay qaladaad badan oo dhacay, markii lagu guda jiray howlgalka xureynta Gobalada dalka Soomaaliya.
Wuxuu ku nuux-nuuxsaday in ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom iminka ay diyaar uyihiin inay dalka oo dhan ka saaraan ciidamada Shabaab ee dadka dhibaatada ku haayo sida uu yiri taliyaha.
Mar uu soo hadal qaaday taliyaha direeska ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Al- Shabaab weeraro ay ku fuliyaan ayuu sheegay in tuutaha ay ka ganacsadaan dad Soomaali ah, balse dhawaan tallaabo laga qaadi doono dadka caynkaasi ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo Mareykanka ku sugan, wuxuu sheegay inuu bilaaban doono howlgalka guud ahaan dalka Soomaaliya looga saarayo Shabaabka hubaysan.